काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)लिमिटेडको संस्थागत समूहको ५ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीको संस्थागत समूहको ५ लाख ४२ हजार ९६५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोहि व्यक्ति, कम्पनी, तथा संघ संस्थाहरुले बोलपत्र आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। सेयरको...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्कट एक्सचेन्ज(नेप्से)ले कम्पनीद्वारा प्रस्तावित १० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ११९८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन कम्पनीको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १३१८...
जनरल इन्स्योरेन्सको सीईओमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा राम चन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको साउन १२ गते मंगलबार ३.३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई कम्पनीको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी आगामी चार वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको चैत ३० गते बसेको...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको लाभांस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाभांस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित १०.५२६३ प्रतिशत लाभांस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको हो । लाभांस वितरण तथा वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भोलि(साउन १४ गते)एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकाले...
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीद्वारा दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले मृतक राजदेव यादवको हकवालालाई रु.२५ लाख रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको हो । मृतक यादवले जगदम्वा मोटर्स प्रा.लि मार्फत नेपाल ईन्स्योरेन्समा दुर्घटना बीमा गराएका थिए । मृत्यु दाबी अन्तर्गतको २५ लाख रुपैयाँको चेक कम्पनीका निमित्त प्रमुख...
नेपाल इन्स्योरेन्सको निमित्त सीईओमा पोखरेल नियुक्त
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा ईश्वर पोखरेल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको साउन ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पोखरेललाई कम्पनीको निमित्त सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कम्पनीमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको करार सेवाको म्याद साउन ८ गते...
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान
काठमाण्डौ । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको ३५९ औँ बैठकले कम्पनीको २७ औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैठकले आगामी साउन ३१ गते आइतबारका दिन भर्चुअलमाध्यमबाट सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिने आ.व...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र आवेदन पेश गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)लिमिटेडको संस्थागत समूहको ५ लाख कित्ता बढी सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीको लिलामीमा राखिएको संस्थागत समूहको ५ लाख ४८ हजार ०२५ कित्ता संस्थापक सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको हो। यो सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोहि व्यक्ति, कम्पनी, तथा संघ...
काठमाण्डौ । बीमा समितिले निषधाज्ञाको समयमा सञ्चालनमा नआएका सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई बीमाशुल्क छुट प्रदान गर्न सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले एक परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सञ्चालनमा नआएको थन्किएको अवधि(ले अप पिरियड) गणना गर्दा निषेधाज्ञा सुरु भएको मितिदेखि लिन र समयावधि नेपाल सरकारबाट...
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको ५ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडको नाममा रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ लाख ५१२ कित्ता संस्थापक सेयर आज(साउन ६गते)देखि लिलामीमा राखिएको हो । यो सेयरमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै बोलपत्र आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक संस्थापक...
जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा अग्रवाल नियुक्त
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको सञ्चालकमा मिता मुरारका अग्रवाल नियुक्त भएकि छन् । कम्पनीको साउन १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई रिक्त रहेको कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । अग्रवाल संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्त भएकि हुन. । यसअघिका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवालले...
अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर रजिस्ट्रारमा सिभिल क्यापिटल नियुक्त
काठमाण्डो । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर रजिष्ट्रारमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नियुक्त भएको छ । अजोड इन्स्योरेन्स र सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडबीच सेयर रजिस्ट्रार सेवाका लागि साउन ३ गते सम्झौता भएको हो। अजोड इन्स्योरेन्सको प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
काठमाण्डौ । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको छ। कम्पनीकोे गत जेठ ६ गते सम्पन्न २५ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित १० प्रतिशत बोनस सेयर गत वैशाख २५ गतेसम्म भौतिक सेयर अभौतिकीकरण गरेका सेयरधनीहरुको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको हो। कम्पनीले उक्त बोनस...
प्रभु इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । हिजो(असार ३१ गते) नेप्सेमा कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको १० लाख ५६ हजार २७४.८४४ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । प्रभु इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि...
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, लाभांस वितरणको प्रस्ताव पारित
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभासम्पन्न भएको छ । कम्पनीको २४ औँ वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको प्रधान कार्यालय नक्सालमा बिहान ११ बजे सभा आयोजना भएको थियो । कम्पनीको गत असार ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २४ औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको थियो । सभामा कम्पनीको हालको चुक्तापूँजी १ अर्ब १२...